September 11, 2019 – Department of Medical Service
Posted on September 11, 2019 by Editor 1
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ သူနာပြုကြီးနှင့် အထက်တန်းသူနာပြု စုစုပေါင်း( ၅၀ ) ဦး တို့အား Training on Evidence-Based Practice in Nursing 1/2019 ကို နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာသိရီဟိုတယ်၌ ( ၅-၉-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့ မှ ( ၇-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါ သည်။ ( ၅-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)၊ဒေါက်တာသီတာလှ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) မှ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ... Read More | Share it now!
National List of Essential Medicines (NLEM) (2016) စာအုပ်အား Review and Revise ပြုလုပ်ရန် ပထမအကြိမ် Technical Working Group (TWG)အစည်းအဝေးကျင်းပ
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံအဓိကဆေးဝါး စီမံချက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော National List of Essential Medicines (NLEM) (2016) စာအုပ်အား Review and Revise ပြုလုပ်ရန် ပထမအကြိမ် Technical Working Group (TWG)အစည်းအဝေးကို TWG အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် (၄-၉-၂၀၁၉) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် Technical Working Group for Review and Revision of NLEM (2016) ဉက္ကဌ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှမှ နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ TWG တွင် ပါဝင်သော ဆေးဝါးဗေဒပညာရှင်များ၏ အားထုတ်ကြိုးစားမှုဖြင့် (NLEM) (2016) စာအုပ်ဖြစ်ပေါ်လာ... Read More | Share it now!
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ သွားကျန်းမာရေးပညာဌာနခွဲ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နမ့်ခုံးရှမ်းများပရဟိတအသင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးမြို့နှင့် International College of Dentitsအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကလောမြို့၊ မဇ္ဈိမယာနလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတကျောင်းတွင် (၃၀-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ ဒေသခံပြည်သူများအား Continue reading →